श्रमजीवि वर्गमा कर प्रणालीको असर... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
श्रमजीवि वर्गमा कर प्रणालीको असर कस्तो होला नाटक (तस्बिरमा)
श्रमजीवि वर्गमा कर प्रणालीको असर कस्तो होला? इटालियन साहित्यकार डारियो फोको ‘कान्ट पे? वेन्ट पे’ भन्न नाटकमा देख्न सकिन्छ। अनामनगरस्थित मण्डला नाटकघरमा यसैको नेपाली रुपान्तरणमा ‘सकेको तिरौला नत्र फिरीमा’ मञ्चन भइरहेको छ।
नाटकमा पात्रहरुले सरकारको कर प्रणालीमा भडास पोखेका छन्, व्यंग्य गरेका छन्। नामै त ‘सकेको तिरौला नत्र फिरिमा’! मंहगीमा कसले किनोस् सामान?
सहरका डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट सामन चोरी हुन थाल्छन्। चोरिको सामान घरघरमा खोजतलासी सुरु हुन्छ। ती सामन चोरी गर्ने झुटमाथि झुट बोल्छन्। सामन लुकाउन थाल्छन्। अनेकन उपाय लगाउँछन्। त्यही चक्करमा नाटकले रमाइलो मोड लिन्छ। दर्शक नाटकको हास्यँ–व्यंग्यमा रमाउन थाल्छन्। विशेषतः महिलाहरु ती सामन आफ्नो शरीरमा समेत लुकाउछन्। दिनदिनै सहरमा गर्भवती महिलाको संख्यामा बृद्धि हुन्छ। यसैको सेरोफेरोमा नाटक घुम्छ।
४ दशकअघि डारियोले लेखेको नाटक नेपालको पृष्ठभुमिमा समयसान्दर्भिक छ। हास्यँ–व्यंग्य स्वादका कारण नाटक रमाइलो र मसालेदार बनेको छ। तर विषयवस्तुले देखाउन खोजेको गम्भिरता यसैबीच ओझेलमा परेको हो की?
सेटमा भने मेहेनत गरिएको छ। भित्तामा रहेका फ्राई प्यान, मोबाइल, लगायत सामानका विज्ञापन बनाइएका छन्। यसले देशको राजनैतिक अवस्था, मुल्यबृद्धि र करलाई पनि सांकेतिक रुपमा बताउँछ। घरबाहिरको झ्यालबाट देखिने सहरको दृश्य कलात्मक छ। मन्दिर एवं घरको आकार देखाउन खोजिएको छ।
नाटकलाई विजय बरालले निर्देशन गरेका हुन्। भाद्र १० गतेसम्म मञ्चन हुने नाटकमा सरिता गिरी, विजय बराल, उमेश केसी, अनुप शर्मा र प्रमिला तामाङको अभिनय देख्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५, ०८:४८:००
'मुखले भन्दै आएको कुरा गीतमा बज्दा कोकोहोलो'
'पलेँटी' श्रृंखला फेरि सुरू हुने
रणविर-आलियाको 'गली व्वाई'ले तीन दिनमा कमायो ५१ करोड